Spondyloarthrosis: लक्षण, उपचार, हेरचाह | कुकुरहरु को विश्व
Spondyloarthrosis: लक्षण, उपचार, हेरचाह
क्यानाइन ओस्टियोआर्थराइटिस, यसको भेरियन्ट्स, सबजेन्स र उपचारको क्षेत्रमा ठूलो भ्रम छ। यस पटकले हामीलाई चिन्तित बनाउने भनेको कल हो ossifel spondyloarthrosis, एक डिजेनेरेटिव रोग जसले कुकुरहरूको मेरुदण्डलाई असर गर्दछ, विशेष गरी उन्नत उमेरका। यहाँ हामी यो विकार, यसको लक्षण, सम्भावित उपचार र आधारभूत हेरचाहको बारेमा कुरा गर्छौं।
1 स्पोंडिलोआर्थोसिस ओस्किपन्स भनेको के हो?
4 निदान र उपचार
5 पूरक उपचार
6 आधारभूत हेरचाह
स्पोंडिलोआर्थोसिस ओस्किपन्स भनेको के हो?
यो रोग पनि भनिन्छ विकृत स्पन्डाइलोसिस र तोतेको चुच्चोयद्यपि त्यहाँ वास्तवमा तिनीहरू बीच केही हल्का भिन्नताहरू मात्र क्षेत्रका विशेषज्ञहरूद्वारा पत्ता लगाउन सकिने हुन्छन्।
यो एक बाट हुन्छ ढिलो डिजेनेरेटिव प्रक्रिया यसले मुख्यतया इन्टरभेर्टेब्रल लिगामेन्टलाई असर गर्दछ। यो कशेरुकाको भाडा भागमा हड्डीको एक्स्टोस्टोज (बोलचालमा "तोताको चुच्चो" पनि भनिन्छ) देखा पर्‍यो।
तिनीहरू प्राय: बीचमा हुन्छन् lumbosacral वा thoracolumbar क्षेत्रहरुक्षेत्र हो जुन सबैभन्दा ठूलो आन्दोलनको अनुभव हुन्छ जब जनावरले शारीरिक गतिविधिहरू गर्दछ। यसैले यसले काम गर्ने कुकुरहरूलाई ठूलो हदसम्म असर गर्छ, यद्यपि यो वृद्ध, ठूला जातका कुकुरहरूमा पनि प्राय: देखा पर्छ जुन उनीहरूको जोर्नीहरूमा कुनै प्रकारको अस्थिरता ग्रस्त छ: घुँडामा चोटपटक, लme्गडाई, हिप डिसप्लासिया, आदि।
हड्डीले यो रोगको नतिजाको रूपमा गठन गर्दछ र वरिपरि नरम ऊतकहरूमा घर्षण उत्पन्न गर्दछ; त्यो मांसपेशिहरु र ligaments मा छ। यो कारण गर्दछ síntomas निम्नको रूपमा:
पेटको क्षेत्रमा दुखाई।
यसका अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यी सबै विघटनहरूले उदासीनता, उदासीनता र कुकुरमा भोक गुमाउनु, अन्य समस्याहरूका साथै उत्पादन गर्दछ। यो सम्भावना पनि छ कि ऊ लापरवाहबाट भाग्ने छ, हिँड्न अस्वीकार गर्ने छ र पीडाबाट उत्पन्न आक्रामक व्यवहार पनि देखाउने छ।
स्पोंडिलोआर्थ्रोसिसका कारणहरू कुनै पनि प्रकारको अस्थिरोथराइटिससँग मिल्दोजुल्दो छ। सब भन्दा साधारण कारण हो शारीरिक ओभरलोड, धेरै जसो व्यायाम वा मोटाई द्वारा प्रायः केसहरूमा दिइन्छ। अर्को सम्भावना जन्म, माइक्रोट्रॉमा र कार्टिलाज परिवर्तनमा रीढ़ की हड्डीमा विकृति हुन सक्छ।
यी कुनै पनि लक्षणहरूको सामना गर्नुपर्दा कुकुरलाई पशुचिकित्सकले जाँच गर्नु पर्छ। यो एक प्रदर्शन हुनेछ मेरुदण्डको रेडियोग्राफिक अध्ययन अस्टियोफाइट्स पुष्टि गर्न वा रद्द गर्न वा क्षेत्र मा हड्डी exostoses। धेरै अवसरहरूमा यस प्रकारको कुनै सम्भावित पैथोलॉजी छ कि भनेर पत्ता लगाउन न्यूरोलोजिकल जाँच पनि गरिन्छ।
यदि निदान पुष्टि भयो भने, विशेषज्ञले एउटा उपचार प्रदान गर्नेछ जुन रोगको स्थितिमा निर्भर गर्दछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ स्पन्डाइलोर्थ्रोसिसको कुनै उपचार छैन, तर यसको लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ केहि औषधि र केही विधिहरूको साथ।
मुख्य उद्देश्य भनेको मेरुदण्डको छेउछाउका ऊतकहरूमा सूजन र पीडा कम गर्नु हो, जसको लागि उनीहरू प्रशासित छन् Nonsteroidal विरोधी भड़काउने औषधि र, धेरै अवसरहरूमा, चन्ड्रोप्रोटेक्टर्स। यस उपचारलाई पुन: स्थापना कार्यक्रमसँग पूरक बनाउन सुझाव दिइन्छ। त्यहाँ एक्यूपंक्चर सिफारिस गर्नेहरू पनि छन्। अवश्य पनि, यी सबै जहिले पनि एक पशुचिकित्सक द्वारा पर्यवेक्षण गरिनु पर्छ।
una पोषक तत्व युक्त आहार यो जनावरको जीवन सुधार गर्ने अर्को ठूलो साँचो हो। भिटामिन सी को खपत अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ, जो कोलेजेन को गठन को अनुकूलता, यसैले सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। अर्कोतर्फ, भिटामिन बी १२ ले हड्डीको संरचनालाई सुदृढ पार्दछ र नियासिनमाइडले उपास्थि चयापचय सुधार गर्दछ।
साथै, अधिक तौल हुनबाट जोगिनाले रोगको प्रगतिलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ र क्यानको पर्याप्त गतिशीलताको पक्ष लिनुहोस्। त्यस्तै, धेरै पटक वैकल्पिक उपचारहरू जस्तै एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरापी वा मसाज धेरै फाइदाजनक हुन सक्छ।
घरबाट हामी कुकुरलाई यो समस्याको सामना गर्न मद्दत गर्न केहि उपायहरू पनि लिन सक्छौं। हामी तिनीहरूलाई संक्षिप्तमा भन्न सक्छौं:
धेरै माथिल्लो सतहबाट जम्पिंग वा ओर्लिनबाट बच्नुहोस्। यो उत्तम छ यदि हामी ओछ्यान र सोफाको नजिक एउटा सानो पाउफ, र्याम्प वा भर्या। राख्छौं। यस तरीकाले जनावर माथि र तल जान सक्छ आफ्नो पछाडि चोट नलगाईकन।
मध्यम व्यायाम एउटा धेरै सामान्य गल्ती कुकुरलाई बचाउन सबै प्रकारको शारीरिक गतिविधिलाई दबाउनु हो, तर यस तरीकाले हामी विपरित प्रभावको कारण हुन्छौं। हल्का पैदल हिँड्न आवश्यक छ तपाईंको स्वास्थ्यलाई जाँचमा राख्नुहोस्, कुनै पशुलाई कहिले पनि तनाव नपार्नुहोस्।
सीढीहरू वेवास्ता गर्नुहोस्। माथिल्लो र सिढीमा जाँदा कुकुरलाई उसको मेरुदण्डमा अचानक आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छ, त्यसैले उसलाई तिनीहरूबाट टाढा राख्नु उत्तम हुन्छ। यदि यो असम्भव छ भने, हामीले आफैंलाई मद्दत गर्नुपर्नेछ कि यसले मेरुदण्डलाई यति धेरै तनाव नपुर्‍याओस्।
घर मालिश। हामी कसरी कुकुरको शरीरमा यसको लक्षणहरू कम गर्न मसाज गर्ने भनेर हामीलाई सोध्न एक क्यानाइरो चिकित्सकलाई सोध्न सक्छौं। यस प्रकार हामी पशु चिकित्सा उपचार को प्रभावहरु लाई सुदृढ पार्छौं।
पशु चिकित्सा जाँच। यदि तिनीहरू सँधै आवश्यक हुन्छन्, जब हाम्रो घरपालुवा जनावर एक रोगले ग्रस्त हुन्छ, पशु चिकित्सा जाँचहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्तै, हामी कुनै पनि प्रश्न वा समस्याको साथ पेशेवर मा फर्कनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » Spondyloarthrosis: लक्षण, उपचार, हेरचाह
के गर्ने र रगतले हाम्रो कुकुरको मलमा के गर्छ
विशेषताहरु र स्पेनिश अलानो को हेरचाह